Đánh giá bột ăn dặm Hipp có tốt không? Loại nào ngon nhất? | Muasalebang - Muasalebang
Đánh giá bột ăn dặm Hipp có tốt không? Loại nào ngon nhất? | Muasalebang
Đang Đọc: Đánh giá bột ăn dặm Hipp có tốt không? Loại nào ngon nhất? | Muasalebang in Muasalebang
Imakethe yamanje yempushana yezingane ihluke kakhulu futhi inothile. Zombili izimpahla zasekhaya nezangaphandle ziyatholakala. Phakathi kwazo, kufanele kukhulunywe ngakho Impuphu yokulumula yemvubu – Umkhiqizo uthengwa omama abaningi ukuze bathengele izingane zabo. Ngakho ingabe impushana yokulumula ye-Hipp ilungile? Ungayisebenzisa kanjani?… Isihloko esilandelayo sizokwabelana ngolwazi oludingekayo mayelana nale powder yomntwana ukuze uthole inkomba yakho.
1 Kafushane ngohlobo lwempushana yokulumula ye-Hipp
1.1 Ingabe impushana yokulumula ye-Hipp ilungile?
1.2 Imikhawulo ye-Hipp yokulumula powder
2 Yiziphi ukunambitheka kwempushana yokulumula ye-Hipp? Yikuphi ukunambitheka okungcono kakhulu?
2.1 Ukuhlukaniswa kwe-German HiPP ye-powder yokulunyulwa ngokweminyaka
2.1.1 Impushana yokudla kwengane yezinyanga ezi-4 ubudala
2.1.2 I-HiPP baby powder yengane enezinyanga ezingu-6 ubudala
2.1.3 Impushana ye-HiPP yengane enezinyanga ezingu-8 ubudala
2.2 Ukuhlukaniswa kwempushana yokulumula ye-HiPP ngokwemvelo
2.2.1 Impushana yokulumula ye-HiPP iqukethe ukunambitheka okumnandi kwe-Milk Pap
2.2.2 Imikhiqizo ye-HiPP baby powder ayinalo ubisi – ngaphandle kobisi:
2.3 Ukuhlukanisa impushana yokulumula ye-Hipp ngombala
2.3.1 1. I-Organic cereal powder I-HiPP – impushana eluhlaza engenabisi
2.3.2 2. I-Blue Hipp Milk powder
2.3.3 3. Impushana yobisi ye-HiPP inombala oluhlaza okwesibhakabhaka we-cobalt oluhlaza okwesibhakabhaka
2.3.4 4. Ubisi lwempushana lwe-HiPP luwolintshi
3 Ungayisebenzisa kanjani impuphu ye-Hipp yokulumula
3.1 Inani elijwayelekile lempushana yenyanga ngayinye yobudala bengane.
3.2 Ungayenza kanjani impushana ye-Hipp engamamayela amahlanu
3.3 Amanye amanothi lapho uxuba impushana yokulumula ye-Hipp
Kafushane ngohlobo lwempushana yokulumula ye-Hipp
I-Hipp iwumkhiqizo omkhulu wemikhiqizo yokunakekelwa kwezingane ehamba phambili eJalimane njenge: impushana yobisi, impushana yengane, ukudla okunomsoco, njll.
Lona umkhiqizo omkhulu othathwa njengomkhiqizo omkhulu wezinto eziphilayo onempilo emhlabeni namuhla. Lolu hlobo lwethenjwa futhi lukhethwa obaba nomama abaningi ukuze izingane zabo zisekele ukuthuthukiswa okuphelele ngokomzimba nengqondo kwezingane zabo.
Xem Thêm Top 5 Lều xông hơi loại nào tốt nhất hiện nay được tin dùng | Muasalebang
Ingabe impushana yokulumula ye-Hipp ilungile?
Ukuhlolwa kwezithako zokudla okunomsoco
Uma ebuzwa ukuthi hlobo luni lwempushana yengane enhle, ngokuqinisekile uHipp ngeke abe khona. Lolu uhlobo lokudla okuyimpushana kwezingane ezisukela ezinyangeni ezi-4 kuya phezulu okusiza ukuhlinzeka ngamaqembu anele okudla okunomsoco angu-4, ngakho-ke kukhethwa omama abaningi ukuze kulungiselelwe izingane zabo ezigabeni zokuqala zokufunda ukudla. Impushana ye-hip inezinambitheka ezi-2, ezinosawoti kanye noshukela, ngakho-ke kulula komama ukukhetha ukusiza ukuvuselela ukunambitheka kwengane kanye nesasasa esidlweni ngasinye.
Ngezigaba ezimbili ze-milk powder kanye ne-non-dairy powder – I-Hipp baby powder iba umkhiqizo osiza omama ukuthi bangabe besakhathazeka ngokukhethela ingane yabo.
– Ngempushana yobisi (ibhokisi ngokuvamile eliwolintshi, eliluhlaza okwesibhakabhaka, eliluhlaza ngokumnyama elinegama elithi “Milk Pap”): Ukwakheka kuqukethe kusuka ku-32-45% impusha yobisi yokukhula enamavithamini A, C, D kanye namaminerali abalulekile afana i-calcium, i-iron, i-zinc ukusiza ukwenezela izidingo zokudla okunomsoco futhi kwengeze amandla ekukhuleni komntwana okuphelele.
– Ngofulawa ongewona owobisi (ibhokisi lizoba luhlaza ngegama elithi “ngaphandle kobisi”): Isithako esiyinhloko isitashi, imicu egayiwe kahle iqukethe uhla olugcwele lwamavithamini abalulekile, amaminerali, namandla. Isipiliyoni sami sokushintsha ukunambitheka kwengane ukuthi uma ngiyixuba, ngivame ukuyihlanganisa nobisi lwebele noma ubisi lwebele, ngezinye izikhathi nejusi yezithelo.
Ikakhulukazi, ku-Hipp ye-powder yokulumula, kukhona amagciwane azuzisayo engeziwe Ama-Probiotics – amabhaktheriya amahle epheshana lamathumbu, avikela isimiso somntwana sokugaya ukudla esingavuthiwe. Ngesikhathi esifanayo, ukudala isimiso somzimba sokuzivikela emathunjini esihle, okwandisa amandla okumunca izakhi, ukunciphisa izifo zokuphazamiseka kokugaya ukudla. Ngaphezu kwalokho, ukwakheka kwempushana yengane kaHipp ayinayo iGluten ngokuphelele. Uhlobo lwenhlanganisela enamathelayo yokwenza bushelelezi, i-viscous, eguquguqukayo kodwa kulula ukuyibangela ukungezwani komzimba futhi kunzima ukuba izingane zibekezelele. Ezinganeni ezingazwani neprotheni yobisi lwenkomo, uma usebenzisa le mpushana, omama bangaqiniseka ngokuphelele ngemikhiqizo ye-Hipp ye-jelly-free.
Impushana ye-Hipp ayinayo iGluten ngokuphelele
Impushana yokulunyulwa kwemvubu ithathwa njengomkhiqizo wemvelo oyingozi.
Imikhiqizo ye-Hipp powder ikhiqizwa ngokuphelele kusuka ku-100% izithako eziphilayo ngaphandle kwamakhemikhali ayingozi noma ukudla okushintshwe izakhi.
Imikhiqizo ikhiqizwa ngaphansi kwenqubo evaliwe futhi ihlolwe ngokuqinile ngokuvumelana nezindinganiso zaseJalimane. Ngezigaba ezingaphezu kuka-260 zokunambitha nokuhlola izinzwa nokuhlolwa, impushana yokulumula ye-Hipp ifanele ukuba umkhiqizo ophephe ngokuphelele empilweni yezingane.
Le mpushana yokulumula ayisebenzisi izinongo noma izithasiselo, imibala, noma izilondolozi.
Ngaphezu kwalokho, imikhiqizo ye-Hipp ibuye ihlolwe njengemikhiqizo ehambisana nemvelo enokuhlolwa okungaphezu kuka-1,300 kokungcolisa imvelo.
=> Lona umkhiqizo wokudla okuqinile wemvelo ophephe kakhulu futhi ofanele izingane eziningi. Ikakhulukazi omama abanezingane ezijwayele ukungezwani nezinto ezithile bangazizwa bevikelekile lapho bekhetha le powder.
Imikhawulo ye-Hipp yokulumula powder
Uma kuqhathaniswa neminye imikhiqizo eyimpushana esuka kwamanye amazwe iye emikhiqizweni yasekhaya enedumela elihle, impushana ye-Hipp inenani eliphezulu. 15-30% ephakeme kuye ngohlobo. Lokhu kubuye kucatshangelwe kubazali abaningi.
Nakuba i-Hipp baby powder ine-flavour ehlukene efika kwangu-16, uma iqhathaniswa nezinye izimpushana njenge-Heinz, i-Gerber, isenokunambitheka okuncane.
Yiziphi ukunambitheka kwempushana yokulumula ye-Hipp? Yikuphi ukunambitheka okungcono kakhulu?
Uma uzibuza ukuthi yiziphi izinhlobo ze-Hipp powder ezitholakalayo, impendulo ithi: kunezinhlobo ezingu-2 ze-powder eziqukethe ubisi olumnandi futhi ezingenalo ubisi olunosawoti. Mayelana nokunambitheka, i-Hipp powder inezinhlobo ezifika kwezingu-16 ezihlukene, ngakho isiza izingane ukuba zibe nezinhlobonhlobo zokudla, zijabulele ukuthola ama-flavour amasha ngaphandle kokukhathazeka ngokuthi zinesithukuthezi.
Ukuhlukaniswa kwe-German HiPP ye-powder yokulunyulwa ngokweminyaka
Impushana yokudla kwengane yezinyanga ezi-4 ubudala
Izinyanga ezi-4 zincane kakhulu ukuthi ziqale ukudla okuqinile, ngakho omama akufanele nje bathembele eminyakeni yobudala kodwa babheke izimpawu zokuthi ingane yakho isilungele ukudla okuqinile ukuze iqale ukuncela. Iminyaka ekahle yokuba izingane zifunde ukudla okuqinile yilapho zinezinyanga eziyisi-6 ubudala. Ngezansi kukhona ezinye zezimpushana zezingane ze-Hipp zezingane ezinezinyanga ezi-4, izinyanga ezingu-5, nezinyanga ezingu-6.
Impushana yobisi & okusanhlamvu: Eyaziwa nangokuthi impushana yokuqala
Ubisi nempushana yesithelo ihlanganisa izinhlobo ezahlukene zePentshisi, Ibhilikosi, Ubhanana nobisi lwempushana.
I-HiPP impusha yobisi yobusuku obuhle: Impushana yobisi ye-apula isekela ukulala, ingane ilala kangcono
I-HiPP Baby Powder kanye ne-Baby Corn Cereal Flavor HiPP Powder
I-HiPP baby powder yengane enezinyanga ezingu-6 ubudala
Ngokungeziwe kuma-flavour oyimpuphu wezingane ezinezinyanga ezi-4 ubudala, omama bangangeza lezi zinambitheka ezintsha lapho izingane zinezinyanga eziyisi-6 noma ngaphezulu ezifana nalezi:
Impushana yobisi lwesithelo sasehlathini
I-HiPP milk powder ubusuku obuhle baby Oatmeal flavour
Impushana enomsoco we-Hipp ifisela umntwana ubusuku obuhle I-Organic Bich Quy
Impuphu ye-cereal enezithelo ezixutshwe, ama-plums, ama-apula, ubhanana, amapheya, amabhilikosi
Ubisi lwempushana yezithelo zobisi
Impushana yokulumula e-synthetic cereal
Impushana yobisi nemifino: ukunambitheka kwesanqante, ukunambitheka kwethanga
Impushana ye-HiPP yengane enezinyanga ezingu-8 ubudala
Lapho eneminyaka engu-8 izinyanga, umntwana uye waphelelisa ikhono lokufundisa kangcono, ikhono lokudla okuluhlaza nalo liyoba ngcono kakhulu. Ngakho-ke, umama kufanele ashintshe indlela yokupheka ukuze kwandiswe uburhalarhume ukuze umntwana athuthukise amakhono okuhlafuna. Ngaphezu kwephalishi, ungasebenzisa impushana yokulumula ye-HiPP ene-flavour yezithelo ezishisayo kanye neyogathi.
Ukuhlukaniswa kwempushana yokulumula ye-HiPP ngokwemvelo
Ngokusekelwe ekwakhiweni komsoco kanye nezakhiwo, i-HiPP powder ihlukaniswe yaba yimpushana ye-HiPP emnandi kanye ne-HiPP powder emnandi.
Impushana yokulumula ye-HiPP iqukethe ukunambitheka okumnandi kwe-Milk Pap
Imikhiqizo ye-HiPP baby powder ayinalo ubisi – ngaphandle kobisi:
Lokhu kubizwa nge-Hipp salted powder futhi akunalo ubisi, olusiza izingane ukuba zigaye kalula futhi zimunce, zigweme ukuqunjelwa ezinganeni ezisanda kuqala ukudla ukudla okuqinile. Njengamanje le powder ihlanganisa lezi zinambitheka ezilandelayo:
I-HiPP yokudla okunomsoco irayisi lezingane (irayisi lengane): Izithako zihlanganisa i-rice core essence, uvithamini B1 … ukusiza ukondla umzimba, ukunikeza izingane amandla ngesikhathi sokukhula, ukwengeza i-fiber ukusiza izingane zigaye futhi zimunce imisoco kangcono. Umkhiqizo ulungele izingane ezinezinyanga ezi-4 ubudala. Impushana ipakishwa enesisindo esingu-200g futhi inenani elingu-112K
I-Cereal powder HiPP Semolina – isanqante: Izithako zihlanganisa okusanhlamvu, izaqathi, … kufanele zisize izingane zigaye kalula, zilale kangcono, zilungele izingane ezisukela ezinyangeni eziyisi-6 ubudala. Impushana ipakishwa enesisindo esingu-200g futhi inenani elingu-112K
Impuphu exutshwe nezinhlamvu ze-Hipp: Iwufulawa onosawoti owenziwe ngezinhlamvu ezingu-100%. Impushana igayeka kalula, ivimbela futhi inciphise ukuqunjelwa, isetshenziselwa izingane ezinezinyanga eziyisi-6 nangaphezulu. Imbewu ipakishwe ku-200 gr futhi inenani lokuthengisa lika-112K
I-HiPP Nutritional powder cereal flavour – ummbila wengane: ufulawa onosawoti omningi wengane engu-75%, okusele ufulawa welayisi, novithamini B1 wengeziwe. Impushana ilungele izingane ezisukela ezinyangeni ezi-4 kuya phezulu. Ikakhulukazi, impushana ayinawo ushukela, ubisi, noma ama-colorants, ngakho-ke iphephile ngisho nasezinsaneni ezinokungezwani nokudla. Ibhokisi ligcwele umthamo we-200 gr futhi linenani lokuthengisa lika-112k
Ukuhlukanisa impushana yokulumula ye-Hipp ngombala
1. I-Organic cereal powder I-HiPP – impushana eluhlaza engenabisi
Lona umkhiqizo okhethekile wokudla okuyimpushana wezingane ezingazwani nephrotheni yobisi lwenkomo. I-powder yengezwe nge-vitamin B1 ebalulekile, iqinisa umzimba, inikeze isitashi namandla ezinganeni ngesikhathi sokukhula, ingeze i-fiber ukusiza izingane ukuba zigaye kalula futhi zivimbele ukuqunjelwa.
Ungawenza kanjani ufulawa we-organic cereal HiPP
Xuba nobisi wenze impushana yobisi
Hlanganisa nemifino, izithelo
Hlanganisa nenyama, inhlanzi… ukuze wenze inhlama enosawoti
2. I-Blue Hipp Milk powder
Ukwakhiwa kwaleli qembu le-powder kuhlanganisa okusanhlamvu, ubisi lwefomula nezithelo ezinhle ohlelweni lokugaya ukudla njengama-apula, amapentshisi, amapheya, amabhilikosi, njll, okuhlinzeka ngezakhi ezibalulekile zokuthuthukiswa kwezingane.
3. Impushana yobisi ye-HiPP inombala oluhlaza okwesibhakabhaka we-cobalt oluhlaza okwesibhakabhaka
Leli yiqembu elikhethekile le-powder elingamakhilomitha amahlanu, eliqukethe izithako: ubisi, okusanhlamvu, ama-apula, njll.
4. Ubisi lwempushana lwe-HiPP luwolintshi
Izithako ezivela kubisi lwefomula, okusanhlamvu nemifino, okucebile ku-carotene, amavithamini B1, A, D yizimfuneko zokuthuthukiswa kwamasosha omzimba, izinzwa kanye nombono.
Imikhiqizo ye-powder yokulumula ye-HiPP, omama badinga kuphela ukuxubana emazingeni okushisa angama-40-50 degrees Celsius, lokhu kunenzuzo kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi amavithamini awahwamuki futhi imisoco ayishintshi emazingeni okushisa aphezulu. . Ngaleyo ndlela kusiza ingane ukuba imunce umsoco ovela ekudleni.
Kuleli qophelo, uthole impendulo, Yiziphi izinambitheka impushana ye-Hipp enazo? Yikuphi ukunambitheka okungcono kakhulu? Imikhiqizo yempushana ye-Hipp enama-flavour amaningi acebile inika omama ukukhetha okucebile futhi okulungele kangcono izingane zabo. Ngakho-ke ayikho into efana nokunambitheka okungcono kakhulu, kodwa omama badinga ukubona indawo kanye nezintandokazi zengane ngayinye ukuze bakhethe impushana ye-Hipp engcono kakhulu nefaneleka kakhulu.
Ungayisebenzisa kanjani impuphu ye-Hipp yokulumula
I-Hipp Nutrition powder ilula futhi kulula ukuyisebenzisa. Akudingeki ukuba umama abe nomsindo noma axabane mayelana nezitsha zokupheka.
Inani elijwayelekile lempushana yenyanga ngayinye yobudala bengane.
Inani lempushana elidingekayo enganeni
Inani lamanzi (ml)
Inani lempushana ngemva kokuxutshwa kwengane (g)
40g (3 – 4 wezipuni)
45g (cishe izipuni ezi-4 ezigcwele)
50g (4 – 5 wezipuni)
Omama kudingeka baxube inani lempushana ngokuvumelana nefomula engenhla ukuze baqinisekise okuqukethwe okunomsoco wengane.
Ungayenza kanjani impushana ye-Hipp engamamayela amahlanu
Isinyathelo 1: Ubilise amanzi ekushiseni kwama-degree angu-100 cishe imizuzu engu-5-7. Bese uvumela amanzi aphole aze afike ku-40-50 degrees Celsius.Izitsha zomntwana, izinkezo nezinkezo kufanele zihlanzwe ngamanzi abilayo ngaphambi kokuzisebenzisa.
Isinyathelo sesi-2: Ngokusekelwe etafuleni elingenhla ukuze uthole inani elifanele lempushana namanzi ngokuya ngeminyaka yengane.
Isinyathelo sesi-3: Isandla esingu-1 sebenzisa isipuni ukuze ugovuze ngobumnene, kuyilapho esinye isandla sibambe ukudla kwengane okuyimpushane, ukuthele kancane ukuze impushane ichitheke futhi ibushelelezi.
Isinyathelo sesi-4: Mama nengane, ngicela ulinde cishe imizuzu engu-1 kuya kwemi-2 ukuze inhlama ikhuphuke ngokulinganayo futhi ibushelelezi. Ngaphambi kokuncelisa ingane yakho, sicela uhlole izinga lokushisa ukuze ugweme ukushiswa kokushisa.
Amanye amanothi lapho uxuba impushana yokulumula ye-Hipp
Uma ingane yakho inesithukuthezi ngofulawa wendabuko, ungazama inhlanganisela yempushana engenalo ubisi nezinongo zezithelo ukuze wenze ukudla okulula kwengane yakho kukhange nakakhulu futhi kube mnandi.
Ezinganeni ezizalwa ezinesisindo esiphansi, ezingondlekile, omama bangafaka ubisi oluyimpushana kule ngxube. Kodwa-ke, lesi silinganiso kufanele sithintwe isazi sokudla ukuze kuqinisekiswe ukuthi uhlelo lokugaya ukudla lwengane lungcono kakhulu.
Nakanjani ungangezi izinongo ekudleni kwezingane ezingaphansi konyaka owodwa ubudala.
Ezinganeni ezingaphezu kwezinyanga eziyisi-6, umama kufanele anikeze umntwana amanzi engeziwe ukuze agweme ukuqunjelwa
Unganiki ingane yakho ukudla okuqinile ngemva kuka-7pm ukuze uqinisekise ukuthi uhlelo lokugaya ukudla alusebenzi ngokweqile.
Ungashisi ukudla okulula okuyimpuphu kuhhavini ye-microwave ukuze ugweme izigaxa futhi kudingeka zivalwe ngokuqinile ngemva kokuvula.
Ngenhla kukhona lonke ulwazi oludingekayo mayelana nempushana yokulumula i-Hipp omama abangabhekisela kuyo ukuze banqume ukuthengela izingane zabo. Inhlanhla komama, nezingane zihlale ziphilile.
Top 4 thương hiệu bánh trung thu chay ngon đúng chuẩn mỹ vị | Muasalebang
Điện thoại OPPO Neo 7s A33FW chính hãng giá tốt tại nguyenkim.com | Muasalebang